cds and clearing ltd(cds and clearing ltd) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
एकमहिनामै लगानीकर्ताले तिरे रु. ३ अर्ब बढी पुँजीगत लाभकर, नेप्से र सेबोनको कमिसन कति ?
काठमाण्डौ । पुँजीबजार चलयमान भएसँगै लगानीकर्ताले सरकारलाई तिर्ने पुँजीगत लाभकर पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै लगानीकर्ताले ३ अर्ब २४ करोड ६९ लाख ४ हजार ७४२ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेका हुन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुँजीबजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता भनेर छुट्याएको फरक–फरक पुँजीगत...
एकैमहिनामा सवा ३ लाख बढीले खोले डिम्याट खाता, 'मेरो सेयर' लिने कति ?
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा आकर्षण झन बढ्दै पाइएको छ। कोभिड महामारीका कारण लगानीका अन्य क्षेत्र शिथिल बन्दा सेयर बजारमा भने चकम आएको छ। केही दिनयता बजार ओरालो लागिरहे पनि लगानीकर्ताको आकर्षण भने घटेको देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्रै सवा ३ लाख बढी लगानीकर्ता सेयर बजारमा थपिएका छन्। सीडीएससीका अनुसार साउनमा...
सीडीएससीले तीव्रगतिमा थाल्यो सेन्ट्रल केवाईसीको काम, कहिलेसम्म आउला यो सुविधा ?
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । के तपाइँ बैंक, वित्तीय संस्था, डीपी र ब्रोकर हाउसैपिच्छे केवाईसी भर्नुपर्ने हालको व्यवस्थाले हैरान हुनुहुन्छ ? अब छिटै यो व्यवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ। अर्थात अब छिटै पुँजीबजारमा सेन्ट्रल केवाईसीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यो व्यवस्था लागू भएपछि सेवाग्राहीले एक ठाउँमा मात्रै केवाईसी अद्यावधिक गरे...
अब ‘मेरो सेयर’ को पासवर्ड बिर्सेमा प्रयोगकर्ता आफैँले रिसेट गर्न सक्ने
काठमाण्डौ । मेरो सेयरको पासवर्ड बिर्सेमा अब प्रयोगकर्ता आफैँ रिसेट गर्न मिल्ने भएको छ। सीडीएससीले मेरो सेयरमा ‘फरगट योर पासवर्ड’ अप्सन थपेसँगै अब प्रयोगकर्ता आफैँले रिसेट गर्न मिल्ने भएको हो। यसअघि मेरो सेयरको पासवर्ड बिर्सेको खण्डमा सम्बन्धित डीपीमा सम्पर्क गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब यो बाध्यता हटेको हो। अब पासवर्ड...
सेयर बजारबाट एकै वर्षमा उठ्यो रु. १४ अर्ब बढी पुँजीगत लाभकर
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयर बजारबाट १४ अर्ब रुपैयाँ बढी पुँजीगत लाभकर उठेको छ। एकै वर्षमा सेयर बजारबाट यति धेरै रकम पुँजीगत लाभकरबाट उठेको यो हालसम्मकै उच्च हो। सीडीएससीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ अर्ब ६ करोड पुँजीगत लाभकर उठेको छ। जुन अघिल्लो वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा १३४६.८४ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो आर्थिक...
यसकारण ‘मेरो सेयर’ समस्या देखिन सक्ने, नयाँ आईपीओ निष्कासनमा पनि ढिलाइ हुने
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता छुट्याउन प्रविधिमा गरिएको अपग्रेडका कारण ‘मेरो सेयर’ मा समस्या देखिन थालेको छ। जसका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका कम्पनीहरुको आईपीओ निष्कासनमा ढिलाइ हुने भएको छ। सीडीएससीका सीईओ पूर्णप्रसाद आचार्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै गरिएको व�...
सेयर बजारमा आजबाट फिफो विधिबाट कर कटौती सुरु, ९०% लगानीकर्ता यसरी बन्दैछन् ट्रेडर
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार आजबाट अल्पकालीन लगानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सीडीएससीका अनुसार आजबाट ‘मेरो सेयर’ मा भएको सेयर अल्पकालीन र दीर्घकालीन भनेर सिस्टममै देखिनेछ र लगानीकर्ताले बेचेको सेयर फस्ट इन फस्ट...
पुँजीगत लाभकरको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ‘मेरो सेयर’ मा थपियो यस्तो सुविधा
काठमाण्डौ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै धितोपत्र बजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि छुट्टाछुट्टै पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सीडीएससीले ‘मेरो सेयर’ प्रणालीमा धितोपत्रको स्वामित्वको अवधि गणना गर्ने सुविधासमेत थप गरेको छ। सीडीएससीले आज (साउन ३ गते) बेलुका ७ बजेदेखि यो...
आउँदो आइतबारबाट सेयरको घरायसी र मृत्यु नामसारी पुनः सुचारु हुने
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण स्थगित सेयरको घरायसी र मृत्यु नामसारी आगामी आइतबारबाट पुनः सुचारु हुने भएको छ। सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले एक सूचना जारी गर्दै स्थगित सेयरको घरायसी र मृत्यु नामसारी आगामी आइतबार (असार २७ गते) बाट पुनः सुचारु हुने जानकारी गराएको हो। निक्षेप सदस्य, सेयर रजिस्ट्रार तथा...
सेन्ट्रल केवाईसी कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सीडीएससी, यस्तो छ तयारी
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । कुनै पनि बैंक, वित्तीय संस्था वा कम्पनीले आफ्नो ग्राहकको पहिचान थाहा पाउने प्रक्रियालाई केवाईसी अर्थात नो योर कस्टुमर भनिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगीलगायतका वित्तीय अपराध रोक्नका लागि केवाईसीको अवधारणा ल्याइएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम नै बैंक तथा वित्तीय...
अब आईपीओ निष्कासन गर्न शुक्रबार नै कुर्नु नपर्ने, जुनसुकै बार जारी गर्न दिने सीडीएससीको तयारी
काठमाण्डौ । भोलि बिहीबार मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ निष्कासन हुँदैछ। यसअघि धितोपत्र कारोबार हुने दिन सिस्टममा भार परेको भन्दै सीडीएससीले शुक्रबारका दिनमात्र आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिइएको थियो। तर मनकामना स्मार्टको आईपीओ बिहीबार धितोपत्र कारोबार हुने दिन नै निष्कासनको अनुमति दिइएको छ। ...
सीडीएससीले साउनबाट अल्प/दीर्घकालीन लगानीकर्ता कसरी छुट्याउला ? यस्तो छ तयारी
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । आगामी साउन १ गतेबाट अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता छुट्टाएर पुँजीगत लाभकर लिने नयाँ व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार १ वर्षभन्दा कम समयावधिको लगानी गर्नेलाई अल्पकालीन लगानीकर्ता मानिनेछ। त्यस्तै १ वर्षभन्दा बढी समयावधिको लगानी गर्नेलाई दीर्घकालीन लगानीकर्ता मानेर सेयर बजारमा...
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । अनावश्यक रुपमा पैसा बढी खर्च गर्न कसलाई पो मन लाग्ला र ? तर कतिपय अवस्थामा सुझबुझ नपुर्याउँदा वा थाहा नहुँदा अनावश्यक रुपमा पैसा बढी खर्च गरिरहेका हुन्छन्। बढ्दो सेयर बजारमा ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता भित्रिरहेका छन्। सेयर बजारसम्बन्धी आवश्यक जानकारी कतिपयमा कमै देखिएको छ। जसका कारण कतिपयले...
अब ‘मेरो सेयर’ पोर्टलको पासवर्ड बिर्सेमा आफैँले रिसेट गर्न सकिने
काठमाण्डौ । अब ‘मेरो सेयर’ पोर्टलको पासवर्ड बिर्सेमा लगानीकर्ता स्वयंले रिसेट गर्नसक्ने सुविधा दिइन लागेको छ। आउँदो असारसम्म यो सुविधा ‘मेरो सेयर’ पोर्टलमा प्रदान गरिने सीडीएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो सुविधा ल्याउनका लागि अहिले प्राविधिक गृहकार्य भइरहेको छ। ‘त्यसो त अहिले ‘मेरो सयेर’...